ကောင်လေးငယ်ရဲ့ အိမ်ကလေး: Myanmar Font Installer v 1.0 Beta For Android မြန်မာ Font ထည့်နည်း
အရင်ဆုံး Myanmar Font Installer ကို ဖွင့်လိုက်ရင်
mmsd ဆိုပြီးရိုက်ပြီး Ok ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
မိမိဖုန်းကို USB Debugging နဲ့ UnKnown Sources ကို On ပြီးကြိုးထိုးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် Connected ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
အကယ်လို့ ဖုန်းနဲ့ Computer ချိတ်ဆက်နိုင်ချင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့
ပြီးသွားရင်တော့ မိမိဖုန်းဟာ Sony Xperia Devices ဖြစ်နေရင်တော့ အောက်က Sony Devices ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
အကယ်လို့ မိမိဖုန်းဟာ Huawei OR တစ်ခြား Devices များဖြစ်နေရင်တော့ အပေါ်က Other Devices ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
Android Version 2.1 ကနေ 3.0 အထိအပေါ်က Button ကိုနှိပ်ပါ။
Android version 4.0 ကနေ 4.1 အထိအောက်က Button ကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးသွားရင်တော့ Keyboard သွင်းမလားမေးပါလိမ့်မယ်..
Keyboard မသွင်းချင်တဲ့သူတွေ No ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
Zawgyi Font ကို မြန်မာလက်ကွက်မပါပဲသွင်းပေးပါလိမ့်မယ်..
Keyboard သွင်းချင်တဲ့သူတွေကတော့ Yes ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
မိမိ နှစ်သက်ရာ Keyboard ကိုရွေးချယ်ပြီး Start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Credit => MMSD
Posted by wai da nar at 6/26/2013 12:36:00 AM